कलेजो खराबीमा देखापर्ने केही लक्षणहरु::Online News Portal from State No. 4
मानव शरीरको सबैभन्दा ठूलो अगंका रुपमा कलेजोलाई चिनिन्छ । पाचन प्रणलीमा यस अगंको ठूलो भूमिका रहन्छ भन्ने त हामी सबैलाई थाहै छ । लगभग १.३६ केजी तौलको एउटा वयस्क मान्छेको कलेजोले मेटाबोलीज्ममा सहयोग गर्दछ । खाएका खानालाई पचाउन अनि पोषण शोस्न पित्तथैली र कलेजोले संगसगै कार्य गर्दछन् । कलेजोले कार्य गर्न छाडेमा सम्पूर्ण शरीर नै बन्द हुन्छ अनि कलेजोको संक्रमण या कार्यकमजोरी बेलामा थाहा हुन नसकेमा हाम्रो स्वास्थलाई गम्भीर हानी पुगिरहेको हुन्छ । हरेक मिनेट नै लगभग १ लिटर रगत छान्ने कलेजोले शरीरमा लगभग १३००० जति बिभिन्न रसायनहरू उत्पादन गर्दछ, शरीरको ८० प्रतिशत कोलेस्टेरोल उत्पादनमा उत्तरदायी कलेजोले कार्य गर्न बन्द गरेमा हामीसंग जीवनको २४ घन्टा पनि बाँकी हुँदैन् । तसर्थ समयमै कलेजोको कार्यकुशलताका बारेमा थाहा पाउन आवस्मायक हुन्छ । मष्तिष्क या मृगौला जत्तिकै कलेजोलाई पनि संवेदनशीलताका हिसाबले उति नै संवेदनशील अंगका रुपमा हामीले हेर्दैनौ जबकी कलेजो पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
कलेजो खराबीको घन्लटी बजाउने क्षणहरु
बारम्बार जण्डिस देखिएमा
प्रोटीन अनि अक्सीजनलाई बितरण गर्न रातो रक्तकोशीकाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, कलेजोमा समस्या आएपछि रातो रक्तकोशिका टुक्रिन अनि क्षय हुन थाल्दछन् । जसले गर्दा शरीर पहेंलो हुने र जण्डिस देखिने हुनसक्दछ ।
पेट बिसन्चो भई सँधै झाडापखाला भइरहेमा हुन त डिप्रशेन, शुरुवाती गर्भावस्ता, माइग्रेन, फुड प्वाइजनिगं लगायतमा पनि यस्तो समस्या हुन्छ तर यी कारणहरुबाहेक पनि पेट सदैव झाडापखाला या दिशामा लगातार रगत आदि देखिएमा कलेजो सम्बन्धी जाँच गराउनु उपयूक्त हुन्छ ।
कलेजोमा खराबी भएमा शरीरमा प्रशस्त बायल उत्पादन हुँदैन जसले गर्दा खानामा अरुची हुन्छ । यसले गर्दा खाएको खाना पनि पर्याप्त रुपमा पच्न पाँउदैन अनि शरीरको तौलमा एक्कासी नाटकीय कमी हुन्छ ।
लगातार कमजोर महसुस हुनु
कमजोरीको महसुस कलेजोकै कारणले मात्र हुन्छ भन्ने त छैन तथापी बिना कुनै बिशेष कारण सधैं कमजोर महसुस गर्नु कतै कलेजोको समस्या त हैन भनि चनाखो हुन जरुरी बताइन्छ । कलेजोले पर्याप्त रुपमा कार्य गर्न नसक्दा यसले उत्पादन गर्ने केमीकलहरुको असन्तुलनमा शरीरमा प्रोटीनहरु कम हुन जाने गर्दछ र त्यसले गर्दा कमजोरी हुने गर्दछ ।
पिसाबको रंग परिवर्तन भएमा
शौचको रंगमा परिवर्तन भएमा
छालाको रंग असामान्य भएमा
सामान्य तया मानिसको शरीर को छालाको रंग पुरा शरीर मा एकनास हुन्छ । कलेजोको एउटा कार्या छालाको रंगलाई सन्तुलन राख्न पनि हो । कुनै आन्तरिक तथा बाह्य कारणले कलेजो मा खराही (Liver Deficiency) भएमा शरीरको छालाको रंगमा र संरचनामा असामान्य परीवर्तन देखिन्छ ।
कतै तपाईलाई आन्द्राको क्यान्सर त भएको छैन ? थाहा पाइरख्नुस
खानपानका कारण आजभोली धेरैजसो पेटसम्बन्धी रोग लाग्ने गरेको छ । त्यसमध्ये आन्द्राको क्यान्सर एक गम्भिर समस्या हो । आन्द्राको क्यान्सर भएको अवस्थामा विभिन्न लक्षणहरु देखा पर्दछन् जसबाट तपाई आफुलाई आन्द्राको क्यान्सर भएको थाहा पाई सचेत रहन सक्नुहुन्छ ।
यस्ता छन् लक्षणहरु
दिसामा रगत देखिनु र कालो दिसा आउनु पेटसम्बन्धी गम्भिर समस्याको संकेत हो । रगत देखिएमा आन्द्राको क्यान्सर हुन सक्छ । आन्द्रामा क्यान्सर हुँदैछ भने बिना कारण नै तपाईको तौल घट्दै जान्छ । आफ्नो तौल प्रति संवेदशील हुन आवश्यक छ । धेरै थकान महशुस पनि आन्द्राको क्यान्सरको संकेत हुनसक्छ । त्यस्तै, आन्द्रामा परिवर्तन आउनु वा वान्ता हुनु पनि ठूलो आन्द्राको क्यान्सरको संकेत हो । यस्तो क्यान्सर पुरुषमा तेस्रो स्थानमा र महिलामा दोस्रो स्थानमा धेरै देखिने क्यान्सर हो । यस रोगको लक्षण पहिचान गर्न पनि निकै गाह्रो हुन्छ, किनभने यस्ता लक्षण अन्य रोग लागेमा पनि देखा पर्छन् । ३० बर्ष काटेपछि प्रत्येक ५ बर्षमा एक पटक ‘कोलनोस्कोपी’ गराई आन्द्राको अवस्थाबाट हरपल जानकार रही क्यान्सरबाट बच्न सक्नुहुन्छ । माथीका कुनै पनि लक्षण देखापरे एक पटक डाक्टरको सल्लाह लिई सुरक्षित रहनुस् ।
यस्तो छ गुप्ताङ्ग गन्हाउने समस्या समाधानको घरेलु उपाय
अधिकांस महिलाहरुको गुप्ताङ्गको दुर्गन्ध एक आम समस्या हो । जिवाणु तथा सफाइमा उचित ध्यान नदिनुले नै दुर्गन्धको समस्या हुने गर्दछ । जसले गर्दा कतिपय अवस्थामा निकै असहज पनि हुने गरेको धेरै महिलाहरुको अनुभव छ । यो समस्या समाधानको लागि धेरै प्रयास गर्दा पनि कतिपय समयमा निको नभएको हुन सक्छ भने कतिपय महिलाहरु स्वास्थ्य जाँच गर्न जान लाज मानेर होस अथवा पहुच नभएर यो समस्याका कारण दुःख पाइरहनुभएको छ होला पक्कै पनि । यो समस्याबाट कुक्ति पाउनको लागि तपाई हामीले घरमै पनि केही सावधानी र उपाए अपनाउने हो भने यस्तो समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ । हो यो समस्या सामान्य घरेलु विधि अपनाए मात्रै पनि यो समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ । प्रशस्त पानी पिउनाले गुप्ताङ्गको दुर्गन्धबाट पार पाउनका लागि तपाईंले प्रत्येक दिन ८ देखि १० ग्लास पानी पिउनुपर्ने हुन्छ । पानीले शरीरबाट विषादि र जिवाणुलाई हटाउने काम गर्दछ ।
यसैगरी दुई चम्चा मेथीलाई एक गिलास पानीमा रातभरी भिजाएर अर्को दिन उठ्ने बित्तिकै खाली पेटमा मेथी छानेर पानी पिउँदा पनि सो समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ । त्यसका लागि तपाईले यो तरिकालाई दुई हप्तासम्म अपनाउनुपर्ने हुन्छ । मेथीले गुप्ताङ्गको दुर्गन्ध हटाउन निकै धेरै सहयोग गर्दछ । यस्तै केहि निमको पातलाई पानीमा उमाल्ने र चिसो भइसकेपछि सो पानीले गुप्ताङ्ग धुँदा पनि उत्तम हुन्छ । यस्तै अमला प्राकृतिक रुपमा रक्तशोधक हो र गुप्ताङ्गमा दुर्गन्ध फैलाउने रोग ल्युकोरिया हुनबाट बचाउने भएका कारण यसलाई काँचै अथवा अचारको रुपमा खाने खाने गर्दा पनि उत्म हुन्छ । यस्तै दहि खानाले पनि गुप्ताङ्गको दुर्गन्धलाई नियन्त्रण गर्न सघाउ पुग्छ । नियमित रुपमा गुप्ताङ्गको सफाई पनि गर्नुपर्छ । सामान्य त पिसाव गरेपछि गुप्ताङ्ग पखाल्ने धेरैको बानी हुदैन तर यदि तपाईमा यस किसिमको समस्या छभने पिसाब गरेपछि पनि गुप्ताङ्ग धुने गर्नुहोस यसले पनि दुर्गन्ध हटाउन मद्दत गर्छ । त्यस्तै तपाईले लगाउने पेन्टी अथवा भित्रि बस्त्र पनि सकेसम्म दैनिक परिवर्तन गर्नुस साथै आकर्षकभन्दा पनि सुतीको नै प्रयोग गर्ने गर्नुस् । नियमित रुपमा सफा र चिसो पानीले यौनानाङ्गको सफा गर्ने बानी गर्नुभयो भने तपाई सजिलै यस किसिमको समस्याबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्छ ।
कपाल नुहाउने बित्तिकै यी गल्ती गर्दा हुन सक्छ खतरा !
दिनभर आफुले गर्ने कामहरुको बारेमा ध्यान नदिँदा नै कपाल झर्ने र टुक्रिने समस्या हुने गर्छ । त्यति मात्र हैन् कपालको स्यहार गर्ने क्रममा थोरै गल्ती गर्दा पनि कतिपय केटा मानिसहरुको त तालो नै खुइलिन्छ । हेयर एन्ड ब्यूटि एक्सपर्टका अनुसार नुहायो भने कपालको जरा कमजोर भएर झर्ने गर्छ । यस्तो बेला गरेको थोरै गल्तीले पनि कपाल झर्ने र टुक्रिने समस्या बढ्दै जान्छ । आज हामी तपाईलाई थाहा नभएका नुहाउँदा हुने गल्तीका बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ ।
–मालिस गर्नुः नुहाउने बित्तिकै चिसो कपाल कहिल्यै पनि मालिस गर्नु हुँदैन् । यसो गरेमा कपाल झर्ने र टुक्रिने समस्या हुन्छ । त्यसैले गर्दा नुहाउने बित्तिकै कपाल मालिस भुलेर पनि नगर्नुहोला ।
–कपाल कोर्नुः नुहाउने बित्तिकै कपाल कोर्नु हुँदैन् । यसो गरेमा कपालको जरा कमजोर हुने र टुक्रिने समस्या बढेर जान्छ ।
–हेयर स्टाइलिङ् मेसिनको प्रयोगः कपाल नुहाउने बित्तिकै ड्राइ वा स्ट्रेट गर्ने मेसिनको प्रयोग गर्नु हुँदैन् । जसको प्रयोगले कपालको जरा कमजोर भइ झर्ने र हाँगा आउने समस्याहरु बढेर जान्छ ।
–कपाल बाँध्नुः नुहाउँने बित्तिकै चिसो कपाल बाँध्नु हुँदैन् । जसको कारण कपालमा इन्फिेकसन हुनुको साथै चायाँ बढ्ने कपाल झर्ने जस्ता समस्याहरु बढी हुन्छ ।
–तुरुन्त बाहिर निस्कनुः चिसो कपाल लिएर बाहिर निकस्कनु हुँदैन् जसले गर्दा कपालमा इन्फेकसन हुनुको साथै धुलोहरुको कारण चाँया बढ्छ र कपाल झर्ने समस्या बढ्छ ।
गल्तीले पनि अनुहारमा नलगाउनुस् यी चिजहरु
सुन्दर बन्ने चाहना हरेकको व्यक्तिको हुन्छ । जसले पनि अनुहारलाई सुन्दर बनाउन सकेसम्म हर कुराको प्रयोग गर्ने गर्छन् । मानव शरीरको सबैभन्दा संवेदनशिन क्षेत्र भनेको नै अनुहार हो यहि अनुहार नै कुरुप भयोभने विभिन्न समस्याहरु आउन सक्छन् । चायापोतो डन्डीफोर जस्ता समस्याले सुन्दर अनुहारलाई कुरुप बनाएर सुन्दरता नै लुटिदिन्छ त्यसैले अरुको लहैलहैमा लागेर अनुहारमा जे पायो त्यहि प्रयो गर्नु हुँदैन् । आज हामी तपाईहरुलाई अनुहार सुन्दर बनाउनको लागि भनेर प्रयोग गर्न नहुने ५ चीजको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ । जसको प्रयोगले अनहारलाई कुरुप बनाउनेछ ।
–मन्जनः इन्टरनेटको दुनियाँले धेरै कुरा सिकाउन सजिले भएके छ । त्यसकै प्रभावले होला मन्जनको प्रयोग गरेर अनुहारलाई चम्किलो बनाएको इन्टरनेटतिर देख्न सकिन्छ । जसको प्रयोगले अनुहारमा चमक त आउँछ तर अनुहार बिग्रन भने धेरै समय लाग्दैन् । जसले गर्दा चाया पोतो डन्डीफोर जस्ता समस्याहरु आउन सक्छन् । –खाने सोडाः धेरैको बुझाइ छ अनुहार सफा गर्नको लागि सोडा प्रयोग गर्नु पर्छ । तर यो बुझाइ एकदमै गलत हो । धेरै समय खाने सोडालाई अनुहारमा लगाउनाले अनुहारमा धब्बा र दागहरु आउने हुन्छ ।
–भनेगरः भेनेगरमा केही मात्रामा एसिड प्रयोग गरिएको हुनाले प्रत्यक्ष अनुहारमा भेनेगरको प्रयोग गर्नु हुँदैन् । जसले अनुहारको छालामा असर पार्ने भएकाले भेनेगरमा अन्य चिज मिसाएर मात्र प्रयोग गर्नु पर्ने छ । सकेसम्म यसको प्रयोग नगर्दा नै उचित हुनेछ ।
–बियरः बियर पनि अनुहारमा लगाउनको लागि उचित छैन् । एसिड मिसेर निर्माण गरिने भएको कारण दैनिक रुपमा अनुहारमा बियर प्रयोग गर्दा डन्डिफोर आउने र अनहार भारी हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।
–पुदीनाः पुदिनाले अनुहारलाई सफा गर्न त मद्दत गर्छ तर धेरै समय पुदिनाको प्रयोग गर्नाले विभिन्न समस्याहरु देखा पर्न सक्छ । कतिपयलाई पुदिनाको प्रयोगले डण्डीफोर आउने गर्छ । आहार बिहारको ख्याल गरौं ।
माथी उल्लेखित कुनै लक्षण देखिएको छ भने एकपटक चिकित्सककोमा अवस्य जानुहोला ।